ယောကျာ်းများမကောင်းကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ယောကျာ်းများမကောင်းကြောင်း
Posted by မမလေး on Oct 10, 2010 in Creative Writing |6comments
ကျွန်တော်ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါ သို့သော်မိန်းမ မကောင်းကြောင်းတွေပဲ ပြောနေသော သူတစ်ယောက် မဟုတ်ကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်…. ။ ကျားဆိုတာက ဥပုဒ်မစောင့်တက်တာလဲ …. သိကြပါတယ်နော် .
ယောက်ျားလေးများတွင် အောက်ပါအချက်(၃) ခုနှင့် ကင်းလွတ်သောသူများ ရှိပါကဂျိုကာရုပ် စာရိုက်နေတဲ့ ဒီလက်ကို ဓားနဲ့ လာသာပိုင်းဖြတ်လိုက်…
ကျွန်တော်ပြောတာက ပုထုဇဉ်တွေကိုနော် ကျန်တာတွေကိုမဟုတ်ဘူး………….။ ကဲ အချက်(၃)ချက်ကို ကြည့်လိုက်နော်….. ကျားမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ ဂျိုကာနောက်ကို လိုက် သတ္တိရှိမှလိုက်…… မှန်ရာကိုဝန်ခံရဲရတယ်နော်…
(၁) တဏှာ ……..
(၃)မူးယစ်ဆေးဝါး(ကွမ်း၊ဆေးလိပ်၊ အ၇က်) အပါအ၀င်ပေါ့ ကဲ …… လက်ခံကြလား ဒီသုံးခု လွတ်တဲ့ ကျားများရှိလို့ကတော့ လေ……တစ်ခုခြင်းစီကို ရှင်းပြမယ် ကြိုပြောမယ် ကျားအားလုံးကတော့ မလွတ်ကြဘူး ဒါပေမယ့် သတိရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့လို ကျားမျိုးကတော့များတယ် အရာရာကို ဆင်ခြင်ဥာဏ်နဲ့ လုပ်တယ်…….
(၁) တဏှာ … အဲလိုပြောလိုက်ထဲကိုက အဆုံးထိမမြင်ပါနဲ့ ……….. နည်းနည်းလေးလျှော့တွေးပေးနော်…… ကျားဆိုတာကတော့ မလွတ်ပါဘူး …… အသိဥာဏ်ရှိသောသူများက ဆင်ခြင်တက်ကြပါတယ်…. ။ (ကဲ ဒီနေရာမှာ ကျားတွေ မဝေဖန်နဲ့နော် ရည်းစာများတာလဲ… တဏှာထဲမှာပါတယ်… (မှတ်ပလား ) …. ဟုတ်မဟုတ်… ကိုယ်ဘာသာအရင်ပြန်မေးလိုက်နော်) ဒီအချက်နဲ့ လွတ်တယ်ဆိုတဲ့ လူပြို (ပျို) ကြီးတွေဆိုပါတော့ (ကိုယ်အကြောင်းကိုသိမှာပါ…ဟိဟိဟိ သားကြောက်တယ်….နော်) (၂) လောင်းကစား……………. လာပြန်ပါပြီးနောက်တစ်ချက်….. လောင်းကစားဆိုပါလားဟ …..လွတ်ကင်းကြပါသလား လောင်းကစားနည်းတွေမြောက်များစွာရှိတယ်နော်… . တစ်လုံး၊ နှစ်လုံး ၊ သုံးလုံး၊ အန်စာတုံး ၊လေးကောင်ဂျင်……….. ဖဲ…..စသဖြင့်ပေါ့ …… လွတ်ကင်းကြပါသလား…………….. အပျော်တမ်းတောင် ဘော်ဒါအချင်းချင်း လောင်းလိုက်ကြသေး ဟေဟေ ကဲလွတ်ကင်းတယ်မှတ်လိုက်ပါတယ်……… အချက်နှစ်ချက် …. ကို လွတ်တာနဲ့ကို သူတော်ကောင်းကျားများ ဖြစ်နေပြီး ဒီလောက်လွတ်နေရင်တောင် ဂျိုကာရုပ် မှန်ရာပြောမယ်နော် စိတ်ဆိုးနဲ့ တစ်ယောက်မှမလွတ်ပါဘူး…………… ကဲလာလရော့ဟယ်….
(၃)မူးယစ်ဆေးဝါး………. ကွမ်း……….မစားတက်ပါဘူး…………ဆေးလိပ်လေး လက်မှာကိုင်လို့………….. ၊ ဆေးလိပ်မသောက်တက်ပါဘူး ……..သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဘီယာသောက်လို့……………….၊ ဘီယာလည်းမသောက်ပါဘူးတဲ့ …………..ကွမ်းဝါးနေရင်းလာပြောနေတယ်……………………. ဟုတ်ပါသလား…..မှန်ပါသလား……………. ဟုတ်ရင် မှန်ရင် လက်ခုပ်သံတွေကြားချင်တယ်……. ကဲ ဘယ်လိုလဲပြော………………. လွတ်ကင်းတဲ့သူတွေရှိရင် ပြောနော် ….. မှန်ရာထပ်ပြောမယ် ဂျိုကာရုပ် မလွတ်ပါဘူး …. ကျားမှန်ရင်တော့ ဂျိုကာရုပ် နောက်ကိုလိုက်နော်…. ..သတ္တိရှိမှလိုက် ဒို့ကအသင့်ကြိုနေတယ်… .ကျားတပ်ဖွဲ့ကို…………. ကဲ ဝေဖန်ချင်နေတဲ့ မိန်းကလေးများ ဂျိုကာရုပ် ရေးထားတာကို ဝေဖန်နော်… မလွနပ်ပါစေနဲ့ သိတယ်ဟုတ် (စားမှာပဲ ၀ါးမှာပဲ ..) ကျွန်တော်တွေ့နေတာလေးတွေကို အပျော်သဘောနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ လျှာအရိုးမရှိတိုင်း လျှောက်ပြောတက်သောသူများ မကဲရဲ့ပါနဲ့ အပြုသဘောဆောင်သော ဝေဖန်မှုများကို သာ ဂျိုကာရုပ် ကမ်းလင့်ကြိူနေမှာပါဗျာ….
ပျော်ရွင်စေခြင်းများစွာဖြင့် ရေးသားလိုက်ပါတယ်……. ဂျိုကာရုပ်
သူငယ်ချင်းကဘာကိုပြောချင်တာလဲ ၊ ခုနက ၃ ခုလုံးလွတ်တဲ့ ယောကျာ်းမရှိဘူးပြောချင်တာလား၊ အဲဒီလို
ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၊ စကားကို အကုန်မပြောဘာနဲ့ လို့ ဘဲပြောချင်ပါတယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
မတွေ့ ဘူးတိုင်း မရှိဘူးလို့ ထင်တဲ့ လူမျိုး တွေ အများကြီးရှိ တော့ ခွင့်လွတ်လိုက်ပါတယ်
တတ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုက ယောကျာ်းများမကောင်းကြောင်း ဆိုမှတော့ပြီးပြီပေါ့။ အဆိုးမြင်ဘက်ကရေးတယ်လို့ ရိုးရိုးသားသားထင်ပါတယ်။ အပျော်သဘောမျိုးနဲ့ ချောင်ပိတ်မေးခွန်းမျိုးပါမေးထားတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုလှတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆိုရင်ကောင်းမလားပဲ။ ယောကျာ်းများ လျှောက်သောလမ်း ဘာညာပေါ့ဗျာ။ တဏှာဆိုတာတော့ ကျားမှ မ မှ မဟုတ်ပါဘူးဗျား။ လူတွေမရှောင်နိုင်ကြလွန်းလို့ကို ဘာသာတရားတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နေကြရတာမဟုတ်လား။ ဘယ်ကစ္စမှာမဆိုချွင်းချက်ဆိုတာရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အချို့လည်းရှောင်နိုင်တဲ့သူရှိရင်ရှိမှာပါ။အပျော်သဘောနဲ့ ရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ အေးလေဘာတတ်နိုင်မှာလဲ။
ပုထုစဉ်လို့ဆိုကတည်းကိုက တဏှာ ဘယ်ကင်းမလဲဗျ ။ အဲဒါကိုများ အဆန်းလုပ်ပြီး ပြောနေရသေးတယ် ။
ဘကြီးတို့က ဆေးလိပ် အရက် ကွမ်း ကင်းမှကင်း
ပုထုဇဉ် ဘ၀မှာဘဲရှိ သေးလို့ တဏှာ မကင်းသေးပါ လောဘမကင်းသေးပါ
ကျွန်တော်ကတော့ ရှင်းရှင်းပဲ။ မကောင်းဘူးဆိုဆို။ ကောင်းတယ်ဆိုဆို။ သုံးခုစလုံးမလွတ်ဘူး။ အဲဒါတွေနဲ့မကင်းလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မကောင်းတဲ့သူ၊ ဆိုးတဲ့လူလို့လည်း မယူဆသလို အဲဒါတွေကင်းရှင်းလို့လည်း သူတော်ကောင်း၊ လူကောင်းတစ်ယောက်လို့ လုံးဝမယုံကြည်ပါဘူး။ ဒါတွေမကင်းနိုင်တာလည်း ကြိုက်လွန်းလို့မဟုတ်ပါဘူး။ မကင်းနိုင်တဲ့လူထဲက လူတစ်ယောက်မို့သာပါပဲ။
သမီးလည်း သမီးဆီကို ရောက်လာတဲ့ ခေါင်းစဉ်အတိုင်း ရေးပြီးတင်လိုက်တာပါ …